सनसिटी अपार्टमेन्टका आरडिटी जाचमा पोजेटिभ देखिएका तीनमध्ये दुई जनामा कोरोना पुष्टि, एकको रिपोर्ट आन बाकी - Health Today Nepal
सनसिटी अपार्टमेन्टका आरडिटी जाचमा पोजेटिभ देखिएका तीनमध्ये दुई जनामा कोरोना पुष्टि, एकको रिपोर्ट आन बाकी
काठमाडौं, २ बैसाख : पेप्सीकोलाको टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बैसाख १ गते आरडिटी माध्यमबाट नमुना परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएका तीनमध्ये दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने एक जनाको रिपोर्ट आउन बाकी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकाश देवकोटाले बताएका छन ।
लण्डनबाट फर्किएका एकै परिवारका तीनमध्ये ५८ वर्षीय पुरुष र ८१ वर्षीय महिलामा कोरोनाको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सोमबार आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा पनि तीनै जनाको पोजेटिभ देखिएपछि पिसिआरबाट थप परीक्षण गरिएको हो । तिनजना मध्ये एक जनामा पोजेटिभ नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ भने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले एकजनाको परिक्षण नतिजा आइनसकेको बताएका छन ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि तीनै जनालाई पाटन अस्पतालको आईसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको हो । उक्त अर्पाटमेन्टमा बस्ने अन्य व्यक्तिहरुको परीक्षण आजबाट सुरु गरिएको छ। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरुको भने कन्ट्राक ट्रेसिङ सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त अपार्टमेन्टमा ५ सयभन्दा बढी बस्ने गरेको बताइएको छ ।
Previous article कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारका ६ टी फर्मुला
Next article लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्म बढाउने सरकारको निर्णय